Xaalada Wadahadalada Ee Paris Saint-Germain Iyo Adrien Rabiot Oo Cirka Isku Shareertay, Kooxda Ree France Oo Quus Taagan & Barcelona Oo Casuumad Ka Dhex Heli Karta – GOOL24.NET
Xaalada Wadahadalada Ee Paris Saint-Germain Iyo Adrien Rabiot Oo Cirka Isku Shareertay, Kooxda Ree France Oo Quus Taagan & Barcelona Oo Casuumad Ka Dhex Heli Karta
November 6, 2018 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa u muuqata mid ku daashay isla markaana quus ka taagan wadahadaladii ay kula jirtay xiddiga kooxdeeda ee Adrien Rabiot kaas oo u muuqda dalabaad waaweyn hordhigay kooxda si uu heshiiska ugu kordhiyo.
Wadahadalka kasoo dhaxeeyay Rabiot iyo kooxdiisa ayaa ah kuwo mudo dheer soo jiitamayay waxaana ay kooxda ree France geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay xiddigan kusii xejisan lahayd balse qorshaheeda ayaa u muuqda mid aan wali wax midho ah dhalin.
Agaasimaha ciyaaraha PSG ee Antero Henrique ayaa lagu soo warramayaa inuu khaati ka taagan yahay dalabaadka qayrul caadiga ah ee xiddigan isaga oo u sheegay inuu ku biiro Barcelona haddiiba uusan heshiiska u kordhinayn kooxdiisa.
Wargeyska xogtan soo warriyay oo lagu magacaabo Paris United ayaa sidoo kale sheegaya in madaxa Paris Saint-Germain ee El-Khellaifi uu haatan ogaaday in xaalada Rabiot iyo Henrique aysan fiican suuqii xagaaga ee sanadkan 2018 markii ay horeba wada xaajoodka u galeen.
Suuqii xagaaga ayay ahayd markii Henrique uu qaatay go’aan layaab leh isaga oo da’yarkan oo uu ka cadhooday qaabka uu u dhaqmayo uu u sheegay inuu ku biiro Barcelona haddiiba uu heshiis shaqsi ah la gaadhay.
Sheekada kale ee naxdinta ku ah Mulkiile El-Khelaifi ayaa ah in dib udhac kale uu galay wadahadalada Rabiot oo qandaraaskiisu ku eegyahay badhtamaha sanadka soo socda ee 2019.
Ugu dambyan, Xaalada Rabiot ayay dhibaato kale ku noqon kartaa inuu waayay booskiisa koowaad ee kooxda isla markaana uusan xidhiidh fiican la lahayn tababare Thomas Tuchel.